SMS Waratada | Iibiyaasha Farriinta Qoraalka
Wednesday, May 19, 2010 Isniin, Janaayo 16, 2017 Adam Yar
Suuqgeynta Suuqgeynta ayaa si dhakhso leh u noqota qayb ka mid ah miisaaniyadaha suuq geynta badan. Inta badan suuqgeynta moobiilku waxay ku timaaddaa mid ka mid ah saddexda dhadhan:
SMS / Text Fariin
Moobilka Webka iyo Codsiyada Moobaylka guud ahaan waa kuwo is-dhexgal ah oo leh qaybo muuqaal ah. Cilladaha labadan midkood ayaa ah inay kharash badan ku kacayaan hirgalintooda iyo joogtayntooda. Sababtaas awgeed shirkado badani waxay ku bilaabaan dadaalkooda suuq geynta mobilada SMS, taas oo sababtay qarax ka dhaca tirada iibiyeyaasha SMS. Qaar ka mid ah iibiyeyaashani waa kuwa kale oo waaweyn oo aan sidaa u badnayn qaarna waa uun… Marka maxaa ka mid ah iibiye SMS fiican? Sideen ku doortaa iibiye SMS / Farriin Qoraal?
Waxaa jira saddex qodob oo muhiim ah in la tixgeliyo markii la dooranayo Iibiyaha SMS:
Iibiyaha ma ku soo gudbiyaa farriimaha koodhka gaaban ama isticmaalaya sms si uu iimayl ugu diro albaabbada? Iibiye kasta oo farriin qoraal ah oo SMS u qalma in lala shaqeeyo waa inuu adeegsadaa lambar gaaban. Adeegsiga emaylka ee loo yaqaan 'sms gateways' ee suuq geynta moobiilku wuxuu jabinayaa shuruudaha adeegga ee guud ahaanna laguma kalsoonaan karo.
Iibiyuhu ma leeyahay khuburo xagga suuqgeynta moobiilka ah Kuwani waa khabiiro aan aqoon u lahayn oo keliya shuruudaha farsamo ee tilmaamaha Ururka Suuqgeynta Moobaylka laakiin sidoo kale waxay ku fiican yihiin inay kaa caawiyaan inaad gaarsiiso waxyaabaha ku habboon dhexdhexaadka. Suuqgeynta moobiilku waa kanaal u gaar ah sababta oo ah waa dabeecad shaqsiyadeed oo qaas ah fariinta waa in lagu abuuraa iyada oo tan maskaxda lagu hayo
Maxay macaamiisha waratada ka yiraahdaan adeegga macaamiishooda? - Macaamiisha faraxsan ayaa ah calaamadda iibiyaha wanaagsan, waxay u muuqataa mid iska cad sax?
Suuqgeynta moobiilku waxay u bislaaneysaa warshad adag laakiin wali wey da 'yar tahay waxaana ciyaartooy badan ku jira ciyaarta. Hubso inaad sameyso cashar guri markaad go'aansaneysid lammaane guurguura.
Tags: marketing mobileSMSsms suuq geynta
Qodobbo aad u fiican, Adam. Doorashada iibiyaha moobiilka SMS-ka dhab ahaan waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah. Ka hubi boostada blog-ka qodobbo muhiim ah oo muhiim ah inaad tixgeliso (iyo su'aalaha aad weydiinayso) markaad go'aan ka gaareyso iibiyaha moobiilka SMS: http://lunchpail.knotice.com/2010/04/28/tips-for-choosing-an-sms-mobile-vendor/